Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : andrianjafintrimoedouard
Entrée Andrianjafintrimo Edouard
Partie du discours nom propre (anthroponyme) [liste complète]
Définition malgache Andrianjafintrimo Edouard (1881-1951) ( Stella, Z Volondanitra, Emma Rasoaseheno, Ny Ela) [3.1]
Ny zokiny indrindra tamin’ny mpanoratra malagasy mbola velona ankehitriny no ho resahina eto. Teraka tamin’ny 28 Mai 1891 tao amin’ny tranon’ny printsesy Raketaka, renin’ny Mpanjakavavy Ranavalona III tao Andohan’ny andohalo Antananarivo izy. Zanaky lahitokan’ ny andriana Rasahenolahy, lehiben’ny Zazamarolahy tamin’ny fanjakan’andriana sady mpitsara malaza tamin’ny tany fahagasy izy, ary ny reniny dia ny andriambavy Rasoanjanahary, zanakandriana – zazamarolahy avy eny Ambalanirany Iharamy. Avy amin’ny lafin-drainy: ny raibeny dia Andriatsaba Andriamahenina, zazamarolahy avy ao Imahazaza, Taranaka faha-5 avy amin’ny Mpanjaka Andriambelomasina izy avy amin’ny zanany faralahiny: Andriatsimitovizafinitrimo. Avy amin’io raibeny io no nangalana ny anarany. Ny renibeny kosa dia taranaky ny Mpanjaka Andrianampoinimerina tamin’ny vadiny Rabodo. Avy amin’ny lafin-dreniny: ny raibeny dia Andriatomponimerina, zazamarolahy avy ao Ambalanirana. Taranaka faha-6 avy amin’ny Mpanjaka Andriambelomasina izy. Ny renibeny kosa indray dia Rakaloanosy avy eny Anosindrakaloanosy Iharamy, izay zanaka vavin’ny Andriamaheritsialaintany, rahalahin’ny Mpanjaka Andrianampoinimerina. Niaina tao anaty ny fe-potoana telo teo amin’ny literatiora malagasy izy dia: ny firoboroboana hatreo amin’ny taona 1915, ny andro sarotra nandriatra ny 7 taona ary ny masoandro nipoaka indray tamin’ny taona 1922 ka mandra-pahatonga ny rebi-kondry ankehitriny. Anarana isehoanay eo amin’ny soratra ny hoe: Z Volondanitra, ny Emma Rasoaseheno, Ny Ela, ary ny sonia isehoany matetika dia Stella, ary tsy iza izany fa E. Andrianjafintrimo. Kely foana sisa tsy ho feno 90 taona ity mpanoratra ity nefa afa tsy ny masony efa pahina dia mbola matselaka sy mahatadidy zavatra be dia be ny sainy. Hany ka mahafinaritra ery ny midinidinika aminy. Endre ny hamaloky ny endriny milaza ny nandraofana ny Basivava gazetiny, tamin’ny taona 1910. Teny kely foana no nifandonany tamin’ny « libre-penseur » tamin’ny fotoana izany. Ary ny fanenjehana azy tsy nianina mihitsy raha tsy niafara tamin’ny fanaovana sesitany azy tany Mayotte (1916) tao aorianana ny nanamelohana azy hanao asa an-terivozina ny taona 1915 tao figadrana Antanimora. Nony tafaverina anefa izy dia, mainka niditra lalina tamin’ny fanaovan-gazety ary namorona mihitsy ny Sakafontsaina tamin’ny 1926.
Tsara vatsy eo amin’ny fahalalana: ny sekolin’ny Frenjy tany Mandrindrano no nianarany voalohany; niakatra teto Iarivo noho ny Menalamba, ary nanohy tao Miaramirindra (Anatirova). Voasivana ho isan’ny « efapolo lahy » tao amin’ny Normal School; izay vao nandalina ny Lettres classiques sy ny philosophie tao amin’ny gezalahy Dr Standing ( Ambohijatovo – atsimo). Tamin’ny teny anglisy sy frantsay no nanaovany izany. Herintaona monja no nampianarany tao Ambohidratrimo (1900) fa dia ny fitanana bokim-barotra no nivelomany mandra-pahatongan’izao fahalehibiazana izao. Vao 16 taona dia nambabo ny Fon’ny Mpamaky: 1897, Na dia efa tonga roa taona aza ny vazaha, dia mbola tia vakiteny malagasy hiany ny olona, ary avy hatrany dia nanintona azy fantratra ny Zava-kanto laoranjy tao amin’ny Sakaizan’ny Tanora. Dia nipoitra taorian’izany ny Nony maloka ny andro, Ny vato tsindry ahazana, Ny fon’ny Vehivavy, tantara mitohy tao amin’ny gazety Lakolosy volamena. Nikoizan’ny mpamaky aok’izany ny Ampofoy Aho, Ry Neny indray miseho tao amin’ny gazety Ny Mpandinika. Raha ny tantara filalao an-dampihazo indray, dia anisan’ny nampalaza an’i Stella ny Ranivo Maritiora, nifarimbonany tamin’i Rasamoelina (Ambatomasina) sy Rainizanabololona, tamin’ny taona 1902. Nolalaovina tao Ambohijatovo – Atsimo sy tao amin’ny théâtre municipal (Ambatovinaky) io. Hipoka foana ny trano tamin’izany hoy izy. Fa anakiray nampalaza an’i Stella koa ilay tantara an-dampihazo hoe: Izy sy ny Fony nentin’ny troupe Telonorefy nitety faritany maro, ary nolalaovin’i Ranaivo Ranarivelo tany Mojanga, tamin’ny oeuvre de guerre (1940). Mbola manan-toerana amin’ny fihetem-po malagasy manadrakandroany ny tononkira Sosay lakana aho rabary, nataon’i Stella tao amin’ny piesy teatraly Rabarimanga.
Havanana amin’ny fanihinana ny fo Malagasy: Na dia teo amin’ny tantara vakiana na teo amin’ny filalao an-dampihazo, dia fantratra mihintsy ny fahaizan’i Stella mahita tarehin-teny mampamolivoly fo sy mampangoragoraka ny mpamaky na ny mpijery. Matetika ampidiriny amin’ny toe-javatra sarotra, vokatry ny adim-piainana sy ny hetraky ny tany ny mpilalao, hany ka voasintona hangorohoro koa ny mpijery. Hain’i Stella anefa ny manafy ny tantara, mba hovakivakian’ny fanantenana sy hiandrandra avotra tsy ampoizina. Hita koa izany eo ami’ny poezy nosoratan’i Stella: tsy maintsy hita taratra eo ny adim-piainana, ny fahoriana mpanjo ny olombelona, ny aloky ny fahafatesana. Na izany aza anefa dia hain’ny mpanoratra ny mandefa taratra hamelona fanantenana. Manamporofo izany ireo tonokira dimy nosoratan’i Stella ao amin’ny Fihirana Protestanta. Indreto ny santionany: Aza mba misento Na mamoy fo; Raha mbola eto Misy ny manjo. ……. Aza kivy hianao Azom-pahoriana. Tany ny fonenanao Misy fihafiana. Toa tsotra ao am-pamakiana ny tononkira nefa voakendry tsy hisy feo mahery na fidangona manaitra, fa mova tsy toy ny bitsibitsika mora sy malefaka aoka izany. Hoy ny filazan’i Rabearivelo an’i Stella tao amin’ny Revue Africaine, ka nampitahany azy amin’i Albert Samain: « na zava-mandalo sy toy ny efa malazo sy tsy manana aina intsony eo amin’ny voahary aza, dia hain’i Stella ny mamelona ireny hampitosaka hanitra marevorevo, ary ny filôzôfia miloatra malefaka avy ao amin’ny poeziny dia mampahatsiaro an’i Vigny, saingy Vigny Tatsinanana ». Asa koa na niteraka aingam-panahy tao amin’ny fasana faharoan’i Rabearivelo ny tononkiran’i Stella ao amin’ny Misaona Mangina ny Fitiavako manao hoe: Ny foko no lapa sy fasa-mangina. Ka.. ao hianao no hovangivangiana. Hianao no velomin’ny fahatsiarovana Ao…hitako velon’ny tsy lai-pahalovana.
Diakona, Loholona ary Mpampianatra sekoly nikoizana ihany koa i Stella, ary tao amin’ny fiangonana LMS tao Ambohitantely izy no nanao izany asan’Andriamanitra izany. Anisan’ny Mpitoriteny malaza teo amin’ny sehatry ny Protestanta i Stella na tao Ambohitantely izany, na teto an-drenivohitra ka hatrany ambanivohitra. Izy no Stella na E. Andrianjafintrimo, mpanoratra, mpanao gazety, mpitolona VVS 1915, « Chef comptable » ny tsena rehetra teo Analakely ary mpamoron-kira. Fialambolin’i Stella ihany koa ny mitendry lokanga ary koa ny manao hosodoko. Nanambady an’i Ramatoa Rasoamanatena izay zafikelin’i Ratafika, rahalahin’i Radama I izy, ary niteraka valo mianadahy. Ireo taranany dia samy mpanoratra nandimby ny anaran-dray daholo. [Nosoratan’ny zanany lahiaivo Ch. Andrianjafintrimo tamin’ny fahaveloman’i Papà Stella. (Source: Nangonina tao anaty vatan’ny fianakaviana)]
Définition française Andrianjafintrimo Edouard (Stella) (1881-1951)
¶ fils du juge [et chef du clan Zazamarolahy] Rasahenolahy, il est élevé près du Rova. Son père sauve la vie du Docteur anglais Fox Standing des Menalamba en 1896. Il est ensuite adopté par cette famille, élevé avec les deux fils jusqu'en 1899. Il apprend les littératures française et anglaise, lit beaucoup, parle anglais. En 1900, il enseigne la photo et la musique dans l'école de la mission anglaise LMS, puis devient photographe et comptable, En 1906, il fonde le journal Ny Basivava ("Le Bavard"), puis en 1914, Loharano, en 1926 Sakafontsaina, qui paraît jusqu'en 1936. Nationaliste, il appartient aux VVS, est arrêté en 1915, condamné à la prison puis à dix ans d'exil à Mayotte, avec d'autres écrivains comme Ramaholimihaso. Ils seront libérés en 1921, après cinq ans. Infatigable écrivain, il est influencé par la versification occidentale, et cherche de nouvelles voies pour une écriture toujours en malgache de poèmes, de nouvelles, publiées dans de nombreux journaux, dont les siens et Ny Akon' Iarivo, Ny Lakolosy volamena. [Ranaivoson 2004]
Vocabulaire Histoire: personnages ~ Littérature: auteurs
Mis à jour le 2017/08/02